मोबाइल र सि’क्री बन्धकी राखेर पनि श’व ज’लाएको छु सपना…हेर्नुहोस् । (भिडियो) – yuwa Awaj
मोबाइल र सि’क्री बन्धकी राखेर पनि श’व ज’लाएको छु सपना…हेर्नुहोस् । (भिडियो)
मंग्सिर ११, २०७७ बिहिबार 14
काठमाडौ : म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर बेलायती समाचार प्रसारण संस्था बीबीसीले तयार पारेको २०२० का प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल भएपछि उनको चर्चा एकाएक चु’लिएको छ ।
सपना पछिल्लो समय पशुपतिमा बे’वारिसे श’व जलाउने काम गर्थिन्। बीबीसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनको नाम विश्वको प्र’भावशाली महिलामा समावेश भएको थियो।
परिचय नखुलेका बेवा’रिसे शवको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा आफूलाई स’न्तुष्टि मिल्ने उनको भनाई छ।
हालसम्म उनले सयभन्दा बढी बेवा’रिसे श’वको व्यवस्थापन गरिसकेकी छन्। उनी श’वलाई हि’न्दु पर’म्पराअनुसार आफै दागबत्ती दिएर अ’न्तिम सं’स्कार गर्छिन्। कुनै बेला सडकको खुला आकाशमुनि जीवन बिताएकी सपना स’डकले नै समाजसेवामा आउन प्रेरित गरेको बताउँछिन्। उनीसँग तेजन खड्काले गरेको छोटो कुराकानी।
बीबीसीको सय प्रभा’वशाली महिलाको सूचीमा पर्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
एकदमै खुसी लागेको छ। मैले सोचेको पनि थिईन्। विश्वका सय महिलामध्ये म पनि पर्न सफल भएछु। एकदमै उत्साहित छु। यो सम्पूर्ण टिमको सफलता हो। हामीले विगतदेखि गर्दै आएको कामको मूल्या’ङ्कन गरेर यो स्तरसम्म पुर्या¥उन सहयोग गरेको छ, बीबीसीले। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
केही समय अगाडी बीबीसीमा कार्यरत कमल परियार र रमा पराजुलीले ‘बहिनी तिम्रो काम राम्रो छ’ भन्दै मेरो काम बारे रिपोर्ट बनाउनुभएको थियो। अनि सम्पूर्ण मिडि’याकर्मी दाईदिदीहरूले मेरो समाचार बनाउनुभएको थियो।
यो खबर औपचारिक रूपमा मैले बिहान १० बजेतिर थाहा पाए। सञ्चा’रकर्मी सोनु लिम्बु र अनुप दाईले फोन गरेर बधाई छ बहिनी भन्नुभयो। मैले के को बधाई दाई भनेर सोधे। दाईहरूले बीबीसीको सय प्रभा’वशाली महिलाको सू’चीमा परेको कुरा अवगत गराउनुभयो। फेसबु्क खोले। अनि बल्ल थाहा भयो।
मलाई जतिले सपना भनेर चिन्नुहुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु। मेरो आफ्नो कारणले मात्र होइन, मलाई हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मीले देखाउनु भएकोले हो। खासमा राज्यले बे’वारिसे श’वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, हामीले आफ्नो बलबुताले सकेसम्म गर्यौं। राज्यले सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा हाम्रो कामको मुल्या’ङ्कन गर्दै मलाई पनि प्रभा’वशाली महिलाको सूचीमा छनौट गरियो। एकदमै खुसी लागेको छ। सम्मानसँगै सामाजिक उत्तर’दायित्व बढेको महसुस गरेको छु।
एकदमै बधाई आइरहेको छ। फोन रि’सिभ गर्न, म्यासेजको रिप्लाई दिन भ्याइरहेको छैन। एकदमै ब्यस्त बनाएको छ। सबैलाई एकमु’स्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु।
समाजसेवामा आउने प्रे’रणा कसरी मिल्यो ?
छोटो समय भएपनि स’डकमा जीवन बिताएको मान्छे भएको हुनाले स’डक जीवनको पि’डा थाहा छ। सडक जीवनका दुःखले मानिसको भोगाइले मलाई समाजसेवामा आउने प्रेरणा मिल्यो। काठमाडौंमा विनयजंग बस्नेतसँग भेट भयो। म उहाँलाई बुवा मान्छु। उहाँ वेवा’रिसे श’वहरू दा’हसंस्का’र गर्नुहुन्छ। म उहाँबाट समाजसेवामा आउन प्रेरित भए।
काम गर्दा कत्तिको समस्या’हरु भोग्नु प¥र्यो?
समस्या धेरै छन्, १८ सय रुपैयाँ शुल्क दा’खिला गरेपछि शव जलाउन मात्र १०–१२ हजार ख’र्च लाग्छ। मैले आफैले लगाएको सुनको सि’क्रीदेखि मोबाइलसम्म बन्ध’की राखेर पनि बेवा’रिसे श’व जलाउन खर्च जुटाएको छु। हालसम्म मैले सयभन्दा बढी लाशको दा’हसंस्का’र गरेको छु।
मेरो आगामी यो|जना अध्ययनसँगै समाजसेवालाई निर’न्तरता दिनेछु। समाजका लागि केही राम्रो काम गरूभन्ने लाग्छ।
अध्ययन कहाँ पुग्यो?‘प्लस टु’ सके। अब ब्या’चलर ज्वा’इन गर्दैछु। समाजसेवा गर्दै मान्छे राजनीतिमा आउँछन्, तपाईको सोच के छ नि?
राजनीति आफैमा गल’त होइन। राजनीतिमा हुनेले फोहोरी खेल खेलेका छन्। राजनीति बारे खासै मलाई थाहा छैन। समाजसेवालाई नै निर’न्तरता दिने हो। राजनीति बारे सोचेको छैन र यसमा आउँदिन पनि।
Prevडा. भट्टराई भन्नुहुन्छ : कालापानी, लिम्पियाधुराबाट सैनिक फिर्ता गर्न भारत तयार भएको छ ।
Nextराजाको छोरो झुपडी र गाउमा ! एक साता अगाडि तनहुँको चिया पसलमा भेटिएका थिए पारस !
हार्दिक बधाई ! डा. गोविन्द केसीले २१ दिनपछि कोरोनालाई जिते…हेर्नुहोस् ।
सुत्नुभन्दा अगाडि यसरी उमालेर खानुको यति धेरै फाइदाहरु…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
बागलुङ र पर्वत जोड्न कालीगण्डकी माथि मोटरेबल पुल बन्ने…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1296)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1296)